लकडाउनका कारण १५ सय किलोमिटर साइकल चलाएर गाउँको यात्रा ! – Khabarhouse
लकडाउनका कारण १५ सय किलोमिटर साइकल चलाएर गाउँको यात्रा !
Khabar house | २९ चैत्र २०७६, शनिबार १६:२७ | Comments
काठमाण्डौ – भारतको ओडिशा राज्यका महेश जेना लकडाउनका कारण महाराष्ट्रबाट साइकलमै आफ्नो प्रदेश पुगे । उनले सात दिनमा झण्डै १५ सय किलोमिटरको यात्रा गरे। ओडिशाको जाजपुर जिल्लाको बडसुआर गाउँका २० वर्षीय यी युवक पछिल्लो आठ महिनादेखि महाराष्ट्रको साङ्गली–मिराजमा पानीको पम्प बनाउने एक कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए ।
तर मार्च महिनाको अन्तिम हप्ता देशभर लकडाउनको घोषणा गरेपछि उनले काम गर्दै आएको कम्पनीका मालिकले पनि पाँच महिना सम्म कम्पनी ब’न्द गर्ने निर्णय लिए । अनि महेशले गाउँ नै फर्किने सोच बनाए । अहिले जाजपुर जिल्लाको एक स्कुलमा बनेको अस्थायी क्वरेण्टीन शिविरमा बसिरहेका महेशले बाँच्नकै लागि यो उपाय अपनाएको बताए ।
महेशले भने, ‘मालिकले पाँच महिना कम्पनी बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि महाराष्ट्रमा गुजारा गर्न कठिन हुने सोचेँ । बचाएको पैसा पनि खत्तम हुने र खान पनि नपाउने हो कि भन्ने लाग्यो । अनि मैले साइकल मै भए पनि गाउँ फर्किने तय गरेँ ।’ तर लक डाउनमा सबै प्रतिबन्धको बाबजुद यति लामो दुरी साइकलमा तय गरेर गाउँ पुग्न सकिन्छ ? डर लागेन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘बिलकुल कुनै डर लागेन ।
जिन्दगीको दाउमा लागेपछि के को डर ? भागवानको नाम लिए अनि गएको अप्रिल १ तारिखमा त्यहाँबाट साइकलमा हिँडे ।’ महेशले यो सेकेण्ड ह्याण्ड साइ कल काममा आउजाउ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर १५ सय भारुमा किनेका थिए र त्यसलाई मर्मत गर्न पाँच सय भारु खर्च गरेका थिए । बाटोमा दुई पटक साइकलको टायर पन्चर भयो, जसोतसो गरेर साइकल ठिक गर्दै उनी अघि बढे । र अन्त्यमा त्यही पुरानो साइकलले उनलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍यायो ।
‘बाटोमा धेरैजसो ढावामा खाना खान्थेँ । प्रत्येक ढावा नजिक दर्जनौँ ट्रक रोकिएको हुन्थ्यो । ढावा बाहिरबाट बन्द देखिए पनि भित्र ट्रकका ड्राइभरका लागि खाना बन्थ्यो । म पनि उनीहरुसँगै खाना खान्थे। तर सबै ठाउँमा ढावा हुँदैन थियो र म बिस्कुट र फलबाट भोक मेटाउँथे । बिहानदेखि रातको ११ १२ बजेसम्म साइकल चलाउँथे र कहीँ ढावा या मन्दिर नजिक सुत्थेँ । म १५ दिनभित्र घर पुग्छु कि भनेर निस्केको थिएँ र तर म बाटोमा निकै कम ठाउँमा रोकिए, दिनमा १० १२ घण्टासम्म साइकल चलाउँथे । त्यसैले सात दिनमा नै यहाँ आइपुगेँ ।’